Useprofethile uDr Khehlelezi ngozongena kweseSilo – AMABHINCA
Useprofethile uDr Khehlelezi ngozongena kweseSilo
Uma kungukuthi awumazi uProfesa Archbishop Khehlelezi, nguyeke lo osesithombeni, indoda ebhula okudlula wonke umuntu owake wamubona, nokuyiyona le eyenza uNgizwe ukuthi adelele kwasani ngoba wazi kahle ukuthi akekho ozomthinta njengoba ekhendla kuKhehlelezi.
kanti uma ufuna ukuyazi lendoda ukuthi ingubani, ingu,"Ndumandumane eyadum'ezizweni, Nondelamzimba Shlahla somdlebe, mkhont'ugwaz'gazi Mbedembede mfaz'onempandla nhliziyo zamadoda zibomvu, ngalunywa izinja ngingaphethe nduku, ngiba sathe ngyafulela kyanetha, ngithi ngyakha kuyadilika, ashuuuuuuuu".
Ibisohlelwenike lensizwa luka Alex Mthiyane ogamalalo "Indaba Yesintu with Alex" lapho ebihlolela khona abantu live ngefoni nokuyilapho uAlex akayibuze khona ukuthi ingakwazi yini ukuhlola ukuthi ubani ozongena ezicathulweni zeSilo, yavuma yathi ingakwazi kodwa angeke ize ikwenze ngenxa yezizathu ezithile zepolitiki. Ube esethi uAlex abakwenze Offline noma kungezwa muntu ebese bayaligcina irekhodi baze balidedele uma esemenyezelwe ngokusemthethweni ozongena, yavumake lensizwa, njengamanje sisemulindelweni wokuthi sizwe ukuthi ishaye khona yina uma sekufike isikhathi esifanele.
Previousivunywe uZimdollar Inkosi Yamagcokama
Nextizobhikla ushameni intaba yaseDubai